Waxaad raadisay Orlistat - aasraw
/Natiijooyinka Raadinta ee "Orlistat"
post 03 / 02 / 2020 阿斯劳
Sida laga soo xigtay xogta ka socota Dib-u-eegista Tirada Dadka Adduunka, Mareykanka wuxuu adduunka 12-aad uga jiraa buurnida dadka ku nool. Xarunta Xakamaynta Cudurrada (CDC) waxay ku qiyaastay in 36.9% dadka waaweyn ee Mareykanka ah ee ka weyn da'da 20-sano jir ay yihiin kuwa buuran, iyadoo lagu saleynayo xogta la soo uruuriyay 2016. Tirakoobka rasmiga ah wuxuu muujinayaa in 41.1% haweenka, iyo […]
wax soo saarka 03 / 02 / 2020 阿斯劳
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo awooda wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaas ah budada Orlistat (96829-58-2), iyada oo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Dufanka Orlistat waa daroogada loo yaqaan 'lipstatin', oo ah nadaafad dabiici ah oo naqshadeeysan oo ah naqshadaha pancreatic ee laga soocay bakteeriyada Streptomyces toxytricini. Orlistat waa daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo cayilka. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah mawduucyadeeda ku salaysan xasilloonida, orlistat ayaa loo doortay lipstatin horumarka sida daroogada ka hortagga buurnaanta.
wax soo saarka 05 / 11 / 2022 阿斯劳
Dehydroepiandrosterone waa hoormoon horudhac ah, taas oo macnaheedu yahay in ay leedahay saameyn bayooloji ah oo iskeed ah, laakiin waxay leedahay saameyn xoog leh marka loo beddelo hormoonnada kale sida testosterone iyo oestradiol. Dehydroepiandrosterone waxaa laga soo saaraa kolestaroolka inta badan lakabka sare ee qanjidhada adrenal, loo yaqaan kortex adrenal, inkastoo ay sidoo kale ay sameeyaan xiniinyaha iyo ugxan-yar yar. Waxay ku wareegtaa dhiigga, inta badan waxay ku xiran tahay baaruud sida dehydroepiandrosterone sulfate, taas oo ka hortagaysa in hormoonka la jebiyo.
wax soo saarka 01 / 20 / 2022 阿斯劳
wax soo saarka 01 / 12 / 2022 阿斯劳
Budada Phosphatidylserine waxay taageertaa shaqada maskaxda waxayna kor u qaaddaa niyadda caafimaadka leh iyo gargaarka garashada, xusuusta, iyo diiradda. Waxa kale oo laga yaabaa inay ku caawiso dulqaadka ciyaaraha iyo soo kabashada jimicsiga.